I-order yokusabalalisa indawo yokugcina indawo yokukhetha ukuqeqeshwa kwe-logistics i-part-time education
Siyiphatha ngenhliziyo nangomphefumulo
Ufunda indlela yokuphatha kahle ngokuthola nokubhalisa izimpahla, ukupakisha kanye nokupakisha bese uzilungiselela ukuthumela.
You enza ukuqoqa oda, agcine inhlangano, ekuphathweni kwendawo nendlela futhi ufunde ukulayisha yakho futhi athula amaloli amaningana.
Amakhono athile okukhulumisana okuphathelene nokusebenzisana namakhasimende nawo afakwe kwiphakethe lakho.
Ukuqeqeshwa kweWarehouse & Distribution kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uhlelo lweWarehouse & Distribution akudingeki ukuba nolwazi olukhethekile lwangaphakathi. Noma kunjalo, kufanele uthumele isitifiketi sezokwelapha kule nkambo.
Njengengqolobane, uhileleke ekugezeni okugcwele kwezimpahla. Uguquguquka kuzo zonke izinto zokugcina izinto.
IBelgium isanda yesikhulumi sezinsiza. I-Port of Antwerp iyaqhubeka ikhula futhi ingumqashi obalulekile. Yingakho, njenge-Wareijnier, unethuba elikhulu kakhulu lokuya emsebenzini.
Ngemuva kohlelo lokulondoloza nokusabalalisa, usengaya ezifundweni ezengeziwe zokuqeqesha esikhungweni esithile sokuthumela umthumeli, umhleli wezokuthutha.
Uhlelo lokuphathwa kwe-logistics lufakiwe kule nkambo.